Chugoku क्षेत्र! Pre प्रान्तहरूमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू - Best of Japan
मियाजीमा मन्दिर, हिरोशिमा प्रान्त, जापान = एडोब स्टक
चुगोको क्षेत्रको दर्शनीय स्थलहरू व्यक्तित्वमा धनी छन् जुन एक शब्दमा व्याख्या गर्न सकिदैन। यसको विपरीत, यदि तपाईं Chugoku क्षेत्र मा यात्रा, तपाईं विभिन्न दर्शनीय स्थल को मजा लिन सक्नुहुन्छ। यस क्षेत्रको दक्षिण पक्ष शान्त सेतो इनल्यान्ड सागरको सामना गर्दछ। हिरोशिमा प्रान्तमा मियाजीमा जस्तो शान्त ठाउँहरू छन्। अर्कोतर्फ, उत्तरी पक्ष एक क्षेत्र हो जहाँ विकास ढिलाइ भएको छ, एक अद्भुत परम्परागत संसार छोड्छ जुन जापानीहरूले पनि बिर्सेका छन्।
फोटोहरू: हिरोशिमा प्रान्तमा मियाजीमा - इटुकुशिमा तीर्थका लागि प्रख्यात
जापान मा विदेशी पाहुनाहरु को लागी एक लोकप्रिय मठहरु मियाजीमा टापु (हिरोशिमा प्रान्त) मा Itukushima तीर्थ हो। यो मठमा समुद्रमा विशाल रातो तोरी ढोका छ। तीर्थ भवनहरू पनि समुद्रमा फैलिन्छन्। ज्वारभाटिको कारण ल्याण्डस्केप लगातार परिवर्तन हुँदैछ। दृश्यहरु ...
फोटोहरू: San'in -A रहस्यमय भूमि जहाँ पुरानो जमाना जापान रहन्छ!
यदि तपाईं शान्त र पुरानो जपानको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, म सान'िन (山陰) मा यात्रा गर्ने सल्लाह दिन्छु। सान-इन जापानको पश्चिमी होन्शुको छेउमा रहेको क्षेत्र हो। विशेष गरी शिमेनी प्रान्तमा म्यात्सु र इजुमो अद्भुत छन्। अब San'in को लागि एक भर्चुअल यात्रा सुरु गरौं! सामग्रीको तालिका San'inMap को फोटोहरू ...
Chugoku क्षेत्र को रूपरेखा
Chugoku मा तपाईंलाई स्वागत छ!
Izumo Taisha Shimine Shimane, जापानमा। प्रार्थना गर्न जापानी मानिसहरु प्रायः २ पटक ताली बजाउँदछन्, तर यस मन्दिरका लागि फरक नियमले उनीहरूले times पटक ताली बजाउनु पर्छ = AdobeStock
Chugoku को नक्शा = शटरस्टक
Chugoku क्षेत्र होनुको पश्चिम तर्फ अवस्थित छ। यो पूर्व र पश्चिम तिर विस्तारित क्षेत्र हो। यस क्षेत्रको बीचमा, पहाडहरू "चुगोकु सांची" पूर्व र पश्चिमसँग जोडिएका छन्। तसर्थ, Chugoku क्षेत्र को दक्षिण पक्ष र उत्तर पक्ष यस पहाड द्वारा विभाजित छ। दक्षिण पक्षको ठूलो जनसंख्या छ, उद्योगहरू विकास गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, उत्तरी भाग घट्दो जनसंख्याको साथ गम्भीर क्षेत्र हो।
दक्षिण पक्षमा हिरोशिमा प्रान्तमा चुगोकु क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू छन्। यस क्षेत्रमा मियाजिमा टापु छ जुन विदेशी पर्यटकहरू बीच सबै भन्दा लोकप्रिय छ। "इट्सुकुशिमा तीर्थ" नामको समुद्री मठ छ।
र हिरोशिमा शहरको हिरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालयलाई त्यहाँ आएका पर्यटकहरूमा अत्यधिक मूल्यवान् छ। हीरोशिमा शहरमा दोस्रो विश्वयुद्धको बेला, आणविक बम खसालियो। यस अनुभवको आधारमा हिरोशिमा जनता शान्तिको लागि दृढ आशा राख्छन्।
चुगोकु क्षेत्रको उत्तर तर्फ लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणहरू इजुमो ताइशा मन्दिर (शिमने प्रान्त) माथिको तस्वीरमा देखिएका छन्, आडाची संग्रहालय कला (शिमने प्रान्त) र तोटोरी स्यान्ड ड्युन्स (तोटोरी प्रान्त)।
Chugoku क्षेत्रमा मौसम र मौसम
शिमानमी कैदो एक्सप्रेसवे र साइकलिंग मार्ग ओनोमिची हिरोशिमा प्रान्तलाई इमामबारी एहिमेम प्रान्त संग जोड्छ जुन सेतो समुद्री टापुलाई जोड्छ = शटरस्टक
Chugoku क्षेत्र को मौसम दक्षिण पक्ष र उत्तर पक्ष मा बिल्कुलै फरक छ। दक्षिण पक्ष मा वर्ष मा कम वर्षा छ। यो सामान्यतया हल्का हुन्छ।
अर्कोतर्फ, उत्तर तर्फ, बादल दिनहरू जाडोमा जारी रहन्छ, वर्षा र हिउँ अक्सर झर्दछ। यो किनभने न्यानो हावा जापानको सागरबाट आउँछ।
यी ओसिलो हावाहरू चुगोकु क्षेत्रको बीचमा पहाडहरूले रोकेका छन् र पहाडहरू हिउँ पर्ने गर्दछन्। त्यसो भए हिम वर्षाको केही पहाडी क्षेत्रहरूमा पर्दछ।
चुगोकु क्षेत्रमा प्रत्येक प्रान्तको एयरपोर्ट छ। प्रत्येक प्रान्तको प्रिफेक्चुरल कार्यालय स्थानहरू सबै एयरपोर्टको नजिक छन्।
Chugoku क्षेत्र को दक्षिण पक्ष मा, सान्यो Shinkansen संचालित छ। त्यसो भए तपाईले सजीलै हिरोशिमा, ओकायामा, यामागुची ओसाका, क्योटो आदिबाट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
टोकियोबाट पनि, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् शिंकान्सेनबाट हवाई जहाजको सट्टामा। वास्तवमा, यदि तपाईं टोकियोबाट ओकायामा प्रान्त वा हिरोशिमा प्रान्तमा जानुहुन्छ भने, धेरै जसो केसहरूमा शि Sh्कनसेन हवाईजहाज भन्दा बढी सुविधाजनक हुन्छन्। दक्षिण तर्फ, तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ फुकुका प्रान्त आदि क्युशुमा तुलनात्मक रूपमा सजिलैसँग।
Chugoku क्षेत्र को उत्तरी पक्ष मा, Shinkansen संचालित छैन। यस क्षेत्रमा धेरै रेलहरू चलिरहेका छैनन्। उत्तर तर्फ, JR सैन-इन मुख्य रेखा पूर्व - पश्चिममा चल्दछ। यद्यपि यस लाइनमा अपरेशनहरूको संख्या थोरै छ।
Chugoku क्षेत्रको उत्तर र दक्षिणमा जोड्ने रेलमार्ग JR Hakubi रेखा हो। यो लाइन प्रयोग गरेर, स्लीपर ट्रेन "सनराइज Izumo" टोकियो स्टेशन बाट Shimane प्रान्तको Izumo सिटी स्टेशन सम्म जान्छ।
बसहरू दक्षिण पक्ष र चुगोकु क्षेत्रको उत्तर पक्षको बीचमा सञ्चालित छन् उदाहरणका लागि, यो करीव ma घण्टा १० मिनेटको बसबाट हिरोशिमा सिटीबाट सिमेने प्रान्तको म्यात्सु शहरसम्म जान्छ।
चुगोकु क्षेत्रको प्रत्येक क्षेत्र भ्रमण गर्नुहोस्। तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ?
अज्ञात पर्यटकहरूले Kurashiki शहर, जापान = Shutterstock को बीकाने जिल्ला मा Kurashiki नहरमा पुरानो जमानाको डु boat्गाको मजा लिइरहेका छन्।
Okayama प्रान्त एक शीतोष्ण क्षेत्र हो। मैले विशेष रूपमा यस क्षेत्रमा सिफारिश गरेको दर्शनीय स्थल कुराशिकी हो। परम्परागत जापानी सडकहरू त्यहाँ छोडियो।
ओकायामा प्रान्त एक शीतोष्ण क्षेत्र हो जुन सेतो इनल्यान्ड सागरको सामना गर्नु पर्दछ। यस क्षेत्रको कुराशिकी शहरमा, परम्परागत जापानी सडकहरू संरक्षित छन्। Okayama शहर Okayama महल र Korakuen बगैचा छ। ओकायामा प्रान्त तुलनात्मक रूपमा ओसाका र हिरोशिमाको नजिक छ, त्यसैले यदि तपाईं पश्चिमी जापानमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सजीलै ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। ...
हिरोशिमा, जापान = एडोब स्टकमा परमाणु बम डोम स्मारक भवन
हिरोशिमा प्रान्तमा दुई धेरै प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणहरू छन्। एउटा हीरोशिमा पीस मेमोरियल संग्रहालय र नजिकैको आणविक बम डोम हो। अर्को मियाजिमा टापु हो। यस टापुमा इट्सुकुशिमा शिन्टो मन्दिर छ, यो जापानको प्रतिनिधि मन्दिर हो।
हिरोशिमा प्रान्त चुगोकु जिल्लाको केन्द्र हो। प्रिफेक्चुरल अफिसको स्थानको साथ हिरोशिमा शहर दोस्रो विश्व युद्धको समयमा परमाणु बमले क्षतिग्रस्त शहरको रूपमा प्रसिद्ध छ। यदि तपाईं हिरोशिमा जानुभयो भने, तपाईं प्रसिद्ध म्यूजियम भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ जुन ती दिनहरू सम्झनामा रहन्थ्यो। एकै साथ तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ ...
टोटोरी बालुवा झरना, टोटोरी, जापान = शटरस्टक
टोटोरि प्रान्त जापानको समुद्रीतर्फ टोटोररी स्यान्ड डुन्स छ जुन माथिको चित्रमा देखाइएको छ। यस क्षेत्रमा तपाईं ताजा माछा र जापानको सागरमा समातिएका केकडाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ राम्रो तातो स्प्रिंग्स छन्।
तोतोरी प्रान्त चुगोकु जिल्लाको जापान सागर छेउमा छ। यो प्रान्त जापान मा कम से कम जनसंख्याको साथ क्षेत्रहरु मध्ये एक हो। यस प्रान्तको जनसंख्या 560,000०,००० मात्र छ। तर यस शान्त संसारमा तपाईको दिमागलाई निको पार्ने धेरै ठाउँहरू छन्। यस पृष्ठमा, म ...
शिन्जी तालमा सूर्यास्त, म्यात्सु, शिमने, जापान
धेरै पुरानो जापान शिमने प्रान्तमा जापानको समुद्री अनुहारमा छोडियो। माथिको तस्वीर शिन्जी ताल यसको सुन्दर सूर्यास्त दृश्यको लागि प्रख्यात छ। Shimane प्रान्त मा Izumo Taisha Shrine र कला को आडाची संग्रहालय को अलावा छ।
पूर्व प्रसिद्ध लेखक पैट्रिक लाफ्काडियो हर्न (१ 1850०-१1904 XNUMX XNUMX) शिमाने प्रान्तको म्यात्सुमा बस्थे र यो भूमिलाई धेरै माया गर्थे। Shimane प्रान्तमा, मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने एक सुन्दर संसार बाँकी छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई Shimane प्रान्त मा एक विशेष अद्भुत पर्यटन गन्तव्य परिचय गराउनेछु। ShimaneMatsueAdachi को सामग्री सामग्रीको आउटलाइन ...
किवाट्यायो पुल Iwakuni, यामागुशी, जापानमा। यो काठको पुल हो जुन अनुक्रमिक आर्चहरू = शटरस्टकको साथ छ
यामागुची प्रान्त चुगोकु क्षेत्रको पश्चिम तर्फ छ। यो प्रान्तले दक्षिणतर्फ सेतो इनल्यान्ड सागर र उत्तर तर्फ जापानको सागर सामना गर्दछ। यदि तपाईं यामागुची प्रान्त उत्तर र दक्षिण यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईं दुबै समुद्रहरू देख्न सक्नुहुनेछ। जापानको सागरको छेउमा, हागी शहर छ जहाँ ऐतिहासिक शहरको दृश्य सुन्दर छ।
यामागुची प्रान्त प्रिफेक्चर हो जुन होन्शुको पश्चिमी भाग हो। यामागुची प्रान्तले दक्षिणतर्फ शान्त सेतो इनल्याण्ड सागरको सामना गर्‍यो, जबकि उत्तर पक्षले ज wild्गली जापानी समुद्रको सामना गर्‍यो। शिन्कानसेन यस प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्रमा चल्दछ, तर उत्तर क्षेत्रमा यो असुविधाजनक हुन्छ ...
Chubu क्षेत्र! १० प्रान्तहरूमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू
Shikoku क्षेत्र!4प्रान्तहरूमा गर्नलाई उत्तम चीजहरू
टोक्यो वरिपरि (कन्तो क्षेत्र)! Pre प्रान्तहरूमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू